“အတွေးစလေးတွေ”: February 2011
ငါနဲ့ဝေးရာ . . .
ငါဆိုသည်ပါ မေ့ချင်ပြီ။ ။
လူတစ်ယောက်မှမရှိဘဲ တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုခုမှာ ငါးမိနစ်၊ ဆယ်မိနစ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်တည်း စိတ်ရောကိုယ်ပါ အနားယူလိုက်ရရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲလေ။
Posted by Han Kyi at 3:46:00 am No comments:
အမျိုးအစား : ကဗျာ, အတွေးအမြင်
ဖန်ဖန်လေ အားအင်နှိုးလို့ရယ် . . .
ကိုယ့်ကျောင်းသားလေးတွေ စာမေးပွဲဖြေရပါတော့မယ်။ ပိတ်ရက်ပါပေါင်းရင်တော့ စာမေးပွဲကာလဟာ ၁၀ရက်ကြာပါလိမ့်မယ်။
စာမေးပွဲပြီးရင် ခရီးသွားမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။
ကြည့်ရင်းရှုရင်း အားတွေကျ၊ မုဒိတာကြောင့် ကုသိုလ်ရ...
တစ်နေ့တစ်နေ့ စိတ်ပမ်းလူပမ်းနဲ့ နေထွက်နေ၀င် ကျောင်းသားအရေး၊ စာမေးပွဲကိစ္စ၊ သင်ကြားမှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ နပန်းလုံးရတဲ့ကြားမှာ ဝေဖန်တာတွေ၊ တိုက်ခိုက်တာတွေနဲ့ နပန်းလုံးနေရတာမို့ ကြာရင်ကိုယ်ပါ လုံးပါးပါးသွားနိုင်ပါတယ်။ စာသင်နှစ်တစ်နှစ်လုံး လူမှုရေးမရှိ၊ ဘုရားသွားကျောင်းတက်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အထိအတွေ့မရှိဘဲ ကျောင်းသားတွေသာ ကိုယ့်ကမ္ဘာဖြစ်နေတာမို့ ၀ါသနာအရင်းခံကြောင့်သာမဟုတ်ရင် အင်မတန်ငြီးငွေ့ပင်ပန်းစရာ အလုပ်ပဲဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။
အလုပ်တွေက တောင်လိုပုံ၊ တာဝန်တွေလည်း ထမ်းမကုန်...
၀ါသနာအရင်းခံနဲ့မို့သာ ပင်ပန်းသမျှခံနိုင်ရည်ရှိပေမယ့် တစ်နေ့ကုန်လို့ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ခြေကုန်လက်ပန်းကျစမြဲပါ။ အိမ်မှာ တစ်ယောက်တည်းနေရစ်ခဲ့ရှာတဲ့ အိမ်ရှင်မခမျာလည်း စိတ်ရောကိုယ်ပါ ငြီးငွေ့မယ်ဆိုတာ ဖွင့်မပြောပေမယ့် ခံစားလို့ရနေပါတယ်။ ကိုယ်က အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လည်း နောက်တစ်နေ့အတွက် သင်ခန်းစာတွေပြင်ဆင်ရ၊ စာတွေဖတ်ရ၊ ကိုယ့်သင်ကြားမှု တိုးတက်လာအောင် လေ့လာရနဲ့ ပျော်ပျော်ကြီးမနားမနေ လုပ်နေရတော့ ကိုယ်ဝါသနာ၊ ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ် ကျေနပ်ပေမယ့် သူ့မှာတော့ သူများလင်ကိုယ်မယားတွေလို ပျော်ပျော်ပါးပါး သွားသွားလာလာနေချိန်နည်းတာကြောင့် စိတ်ညစ်မယ်ဆိုလည်း ညစ်ချင်စရာပါ။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း သင်ကြားရေးကို ဘယ်လောက်ပဲ ၀ါသနာပါတယ်လို့ဆိုပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း အာရုံတွေငြီးငွေ့လာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းခွင်မ၀င်ခင် အိမ်မှာရှိနေချိန်မှာပဲ အဲဒီလို စိတ်မျိုးတစ်ခါတစ်ရံ ၀င်တတ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ရောက်ရင်တော့
ခဏနဲ့ပဲ အလုပ်ထဲမှာ အလွယ်တကူ စီးမြောပျော်ဝင်ပြီး ကျောင်းသားတွေနဲ့ တသားတည်းဖြစ်သွားတတ်တာ အင်မတန်မှ ကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ဒါကလည်း သင်ကြားမှုမှာ ၀ါသနာကြီးလွန်းတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာပဲလုပ်လုပ် အကောင်းဆုံးလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်အယူအဆတစ်ခုကလည်း ကိုယ့်ကို ကြာကြာမငြီးငွေ့အောင် ပံ့ပိုးတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီစာသင်နှစ်တစ်ခုပြီးရင်တော့ အနောက်တိုင်းသားတွေလို အားလပ်ရက်ရှည်တစ်ခုယူပြီး ခရီးရှည်ထွက်ဦးမှလို့ စိတ်ကူးရပါတယ်။
သွားချင်လှတဲ့ အင်းလေးကန်၊ ရေပတ်လည်ကို တောင်ဝန်းရံ...
ခရီးထွက်ဖို့ စိတ်ကူးပြန်တော့လည်း ကိုယ်နေတဲ့ဒေသနဲ့ အလွန်အလှမ်းကွာလွန်းတဲ့ နေရာတွေကို စိတ်ကူးလို့ မဖြစ်နိုင်ပြန်ပါ။ ခရီးပမ်းမယ့် ဒဏ်နဲ့ ရမယ့်အပန်းဖြေ စိတ်ကြည်နှုးမှုမမျှမတ ဖြစ်သွားရင် ရှိစုမယ့်စု ဖွတ်ကလိဒင်္ဂါးလေးတွေ နှမြောစရာ ကောင်းလွန်တာကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းက ပုဂံကိုပဲ သွားဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ ပုဂံကို ခပ်ငယ်ငယ်အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀က ဘော်ဒါကျောင်းသားတွေနဲ့တစ်ခါ၊ ဆေးကျောင်းသားဘ၀က ပျော်ပွဲစားခရီးတစ်ခါ စုစုပေါင်းနှစ်ခါတော့ ရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူများစိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုသွားရတဲ့ ခရီးဖြစ်တာကြောင့် ရင်ထဲမှာ ထိုက်သင့်တဲ့ ကြည်နှုးမှုမျိုး မရခဲ့ရိုးအမှန်ပါ။
အင်းရေပြင်မှာ ရေတွေရှား၊ သွားချင်စိတ်ကို ချိုးနှိမ်ထား...
ရောက်ချင်ရာရောက်၊ နားချင်ရာနား၊ စားချင်ရာစားလို့ စိတ်ရောကိုယ်ပါ အနားယူချင်တဲ့လူမျိုးပါ။ ခပ်ငယ်ငယ်အရွယ်ကတော့ ခရီးသွားရင် အစီအစဉ်တွေချ၊ ခရီးစဉ်တွေဆွဲနဲ့
( တက္ကသိုလ်မှာ Family အတွင်းရေးမှူးလုပ်ပြီး ပျော်ပွဲစားခရီးပေါင်းများစွာ စီစဉ်ပေးခဲ့ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အကျင့်ပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့) စံနစ်တကျ ခရီးထွက်တာမို့ ခရီးစဉ်ချောမွေ့ပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ ထင်သလောက် အပမ်းမပြေလှပါ။ နေရာတကာ ကိုယ့်ခရီးစဉ် အဆင်ချောဖို့ စိတ်ထဲမှာရှိနေမိတာကြောင့် ကိုယ့်စီမံကိန်းနဲ့ ကိုယ် ပိတ်မိနေပြီး ဒေသန္တရ ဗဟုသုတ ရတာကလွဲလို့ စိတ်အပမ်းပြေမှု ရသင့်သလောက် မရတာပဲ ဖြစ်မယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခါ ခရီးသွားရင်တော့ ဘာမှကြိုတင်မစီစဉ်တော့ဘဲ ရောက်ရာပေါက်ရာကို စိတ်ထင်သလို သွားလိုက်ဖို့ အားသန်မိပါတယ်။
ဒါမျိုးဖြစ်မှာ ကြောက်ပါတယ်၊ လေယာဉ်လက်မှတ် တို့မ၀ယ်...
ရိုးရာကိုပဲ အားပေးမယ်၊ မြင်းလှည်းလေးနဲ့ လျှောက်လို့လည်...
ဒီလို ခရီးသွားဖို့ စိတ်ကူးယဉ်ထားမိတဲ့ အတွက် အလုပ်လုပ်ရာမှာ အရင်ကလို ငြီးငွေ့တာတွေ၊ ပင်ပန်းတာတွေ သိပ်မရှိတော့ဘဲ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပိုပြီးပျော်ရွှင်တက်ကြွလာတာ ခံစားမိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ အစစအရာရာ စံနစ်တကျရှိလှတဲ့ အနောက်တိုင်းသားတွေက Vacation trip တွေကို တန်ဖိုးထားကြတာ ဖြစ်ဟန်တူပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရင်ထဲကပါ အမြတ်တနိုးရှိလှတဲ့ မြန်မာ့သမိုင်းရဲ့ အမွေ၊ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ရာဇ၀င်အစဖြစ်တဲ့ ပုဂံဆိုတဲ့ ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် ရှေးမြို့တော်ဟောင်းကို ရောက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ကြောင့်လည်း ပါသင့်သလောက်ပါမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျောင်းသားဘ၀က ပုဂံမြို့အ၀င် သရပါတံခါးကို ရောက်တိုင်း ခံစားရတဲ့ ဇာတိပုည၊ ဂုဏ်မာနကို ရင်ထဲမှာ ပူပူနွေးနွေး ပြန်ခံစားလာရသလိုပါ။
သရပါကို လှမ်းအမြင်၊ ဇာတိမာန်တို့ ခေါင်းထောင်ချင်...
တစ်ရက်တစ်ရက် ပင်ပန်းလွန်းလို့ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ပုဂံကို ခရီးထွက်ဖို့ တစ်ရက်နီးလာပြီဆိုတဲ့ အသိက ပင်ပမ်းသမျှကို တစ်ဝက်မက သက်သာစေပါတယ်။ မသွားရသေးတဲ့ ဒီခရီးစဉ်အတွက် အိမ်ရှင်မနဲ့အတူ ကြိုတင်ပြီး တွေးရပြောရတာလည်း အရသာ တစ်မျိုးပါ။ ပုဂံကို စိတ်စွဲလွန်းတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့။ ညဘက်အိပ်မက်ထဲမှာတောင် ဘူးဘုရားရင်ပြင်တော်မှာရပ်ရင်း တသွင်သွင်စီးပြီး လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ပေါ်မှာကျနေတဲ့ နေလုံးနီနီကြီးကို ကြည့်နေတယ်လို့ အိပ်မက်မက်မိပါတယ်။
ဘူးဘုရားနဲ့ မြစ်ဧရာ၊ အိပ်မက်မှာလည်း ကြည်မွေ့စွာ...
ဘာပဲပြောပြော ဒီခရီးကို သွားဖို့စီစဉ်ခြင်းဟာ တစ်ကိုယ်ရည် စိတ်အပမ်းဖြေခြင်းဆိုတာထက် လာမယ့်စာသင်နှစ်မှာ စိတ်သစ်၊ လူသစ်၊ အတွေးအမြင်သစ်တွေနဲ့ တပည့်သစ်တွေကို အင်တိုက်အားတိုက် သင်ကြားပို့ချပေးနိုင်အောင် ရည်ရွယ်ရင်းက အဓိကမို့ အတ္တကို အရောင်တင်ရုံမဟုတ်ပဲ ပရဟိတ စိတ်ကလေးပါ ပါနေသေးတာကြောင့် သွားကိုသွားသင့်တဲ့ ခရီးဖြစ်တယ်လို့ ကိုယ့်တရားကိုယ် စီရင်ပြီး အကျေနပ်ကြီးကျေနပ်နေမိသလို ကျန်နေသေးတဲ့ စာသင်ချိန်တွေကိုလည်း ကြည်နှုးပျော်ရွှင်စွာနဲ့ တက်တက်ကြွကြွ ပို့ချနိုင်အောင် ပံ့ပိုးပေးလိုက်တာကြောင့် အင်မတန် အကျိုးရှိတာတော့ မငြင်းသာအောင် သေချာနေပါကြောင်း။ ။
Posted by Han Kyi at 11:26:00 am No comments:
လမင်းကို ခွေးဟောင်ခံရခြင်း . . .
ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျရတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ရှိသလို၊ စိတ်တိုင်းမကျသေးတဲ့ ကျောင်းသားတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေး ရှိနေဆဲပါ။
နှစ်ကျကျောင်းသားတွေ (ကိုယ်တို့အခေါ် နှစ်ဟောင်းတန်းကျောင်းသားတွေ) မှာတော့ အထက်တန်းကျောင်းကို သွားစရာမလိုတာကြောင့် စာသင်ချိန်ပိုရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင်ခန်းစာတစ်မျိုးတည်းကိုပဲ ခေါင်းထဲည့်ထားရတာမို့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ကင်းကင်းနဲ့ ပညာသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။ သင်ကြားရေးရော၊ စည်းကမ်းပိုင်း၊ စာသင်ချိန်ပိုင်းပါ ကိုယ်စီမံတဲ့အတိုင်း တစ်သဝေမတ်ိမ်း လိုက်နာနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးရတာကြောင့် အခုလို ကာလမှာ စိတ်အေးလက်အေးနဲ့ နေနိုင်ကြပါပြီ။ သူတို့အဖို့ကတော့ သင်ပြီး၊ ကျေညက်ပြီးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို ပြန်နွှေးရင်း အမှတ်ကောင်းကောင်းရဖို့ အာရုံစိုက်ရုံပဲ လုပ်စရာလိုပါတော့တယ်။
ဒီကာလဟာ စိတ်ရော၊ ကိုယ်ပါ ပင်ပန်းဆင်းရဲလွန်းတဲ့ ကာလပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ခမျာ ကျောင်းတစ်ဖက်၊ အပြင်သင်တန်းတစ်ဖက်နဲ့ စာသင်နှစ်တစ်နှစ်လုံး တစ်နေကုန် တစ်နေခမ်း နားချိန်ရယ်လို့ လုံးဝမရှိဘဲ တပင်တပန်း ပညာသင်ယူကြရရှာပါတယ်။ တခြားဒေသက အထက်တန်းကျောင်းတွေလို မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တို့ဒေသက အထက်တန်းကျောင်းက တက္ကသိုလ်ဝန်တမ်းကျောင်းသားတွေကို မနက်ခင်း၈နာရီကစပြီး ကျောင်းတက်ခိုင်းပါတယ်။ ညနေပိုင်းမှာ သုံးနာရီခွဲ ကျောင်းလွှတ်ပြီး ၆နာရီကနေ ၁၀နာရီအထိ ညတန်းအချိန်ပို ခေါ်သင်ပါတယ်။ စနေနေ့တိုင်း မနက်တစ်ပိုင်းလုံး အချိန်ပို ရှိပါသေးတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့တစ်ရက်ပဲ နားချိန်ရကြတာပါ။ နယ်မြေမအေးချမ်းတဲ့ ကာလရောက်ပြန်တော့ ညနေ၂နာရီခွဲကို ကျောင်းလွှတ်ပေးပြီး ၄နာရီကနေ ည၈နာရီအထိ ညတန်းဆိုပြီး သင်ပါသေးတယ်။ သင်လည်း သင်နိုင်တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို ချီးကျူးရမလိုပါ။
တခြားဒေသတွေမှာ ခရစ်စမတ်ကျောင်းပိတ်ပြီးတာနဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းတွေကို ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန် (Private Study) ပေးလေ့ရှိကြပေမယ့် ဒီမြို့မှာတော့ စာမေးပွဲကြီးမဖြေခင် ၁၄ရက်ပဲ ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန်ပေးပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ရက် နည်းနည်းပဲ ရတာကြောင့် သူတို့လေးတွေခမျာ အချိန်ကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမှန်း မသိတော့ဘဲ ပျာယာခတ်ကြရတာ များပါတယ်။ ဒီကာလလေးအတွင်းမှာ သူတို့ကို စာမေးပွဲအထောက်အကူပြုပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပေးရတဲ့ ကိုယ်တို့ Private Teacher တွေမှာလည်း အင်မတန် စိတ်ပင်ပန်းပါတယ်။ ကိုယ်ပင်ပန်းတာကို စာမဖွဲ့ပေမယ့် ကိုယ့်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ စာမေးပွဲမှာ အခြေမလှမှာ၊ သူတို့ဘ၀တွေ သူများထက် အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်မှာ စိတ်ပူရတဲ့ စိတ်ပင်ပန်းမှုကတော့ ဘာနဲ့မှ နှိုင်းမရအောင် ဆိုးလှပါတယ်။ စာသင်ချိန်တွေသာ များလွန်းပြီး ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန် ကောင်းကောင်း မရှိခဲ့ကြတာမို့ သင်ခန်းစာအများစုကို မြင်ဖူး၊ ကြားဖူးရုံသာသာကလွဲပြီး ဘာက်ိုမှ တိတိကျကျ မမှတ်မိကြသေးတဲ့ ဒီနှစ်တက်ကျောင်းသားလေးတွေကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကူညီပေးနေရင်းက မလိုအပ်ဘဲ ပင်ပန်းလွန်းနေတဲ့ ဒီကလေးတွေကို သနားမိပါတယ်။
ဆရာရော တပည့်ပါ ရွှင်လန်းတက်ကြွ...
နိုင်ငံတကာက ကျောင်းသားလေးတွေကို ကြည့်လိုက်မိရင် ကိုယ်တို့ ကျောင်းသားတွေလို မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှု အပြည့်၊ ကျန်းမာရေး၊ ကြံ့ခိုင်မှု အပြည့်၊ ဗဟုသုတ အပြည့်၊ ရှိကြတဲ့ အပြင် လူမှုထောက်ကူပြု သင်ခန်းစာတွေဖြစ်တဲ့ ဂီတ၊ အားကစား စတဲ့ ဘာသာရပ်တွေမှာလည်း စွမ်းစွမ်းတမန် ရှိကြတာ အင်မတန် အားရစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ သူတို့ ကျောင်းသားတွေကို ကြည့်ရင် အမြဲလိုလို ရွှင်လန်းတက်ကြွနေကြသလိုပါ။ ကိုယ်တို့ ကျောင်းသားတွေခမျာမှာတော့ တစ်နေကုန်တစ်နေခမ်း စာသင်ခန်းထဲမှာပါ အချိန်တွေကုန်နေပြီး အားကစားချိန်၊ ဂီတ၊ ပန်းချီချိန်တွေဆိုတာ အချိန်စာရင်းမှာပဲ ထည့်ဆွဲပြီး အဲဒီအချိန်တွေမှာပါ စာတွေ ဖိသင်တာခံနေရတာကြောင့် မရွှင်မပျမျက်နှာလေးတွေနဲ့ ရှူနာ၊ ရှိုက်ကုန်းလေးတွေပဲ များပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ရင် ပညာကိုစွမ်းစွမ်းတမန်ကြိုးစားတဲ့ ရုပ်ပေါက်နေပေမယ့် တကယ်တန်းကြရင် မှန်းသလောက်မ၀င်၊ ထင်သလောက် မဟုတ်တာတွေပဲ များပါတယ်။ မလိုအပ်ပဲ ပုံကြီးချဲ့ပြီး ပင်ပန်းအောင် လုပ်တာခံနေရတယ်လို့ပဲ မထောက်မညှာပြောလိုက်ရင်လည်း ကိုယ့်ကို စိတ်ခုကြပါဦးမယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အနာဂတ်၊ ကိုယ့်ကလေးတွေရဲ့ ပန်းတိုင်အတွက် အများမုန်းတာခံရလည်း ဦးဟန်ကြည်ကတော့ အပြုံးပျက်မယ့် လူစားမျိုးမဟုတ်ပါ။
ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အနာဂတ်အတွက် ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ ဦးဟန်ကြည်တို့ Private Teacher တွေမှာလည်း ဆူးကြားက ဘူးခါးတွေ သာသာပါ။ ကျောင်းတော်ကြီးက ချစ်စွာသော ဆရာဆရာမတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်တာကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး ခံကြရပါတယ်။ ၀ါသနာကြီးလွန်းလို့သာ ဒီအလုပ်ကို လုပ်နေတာမို့ ဘာမဆို ကလေးတွေမျက်နှာက်ိုကြည့်ပြီး သည်းခံရပေမယ့် ပါရမီမရင့်သေးတဲ့ သာမန်လူသားပေမို့ စိတ်ထဲမှာတော့ နည်းနည်းမှ မကျေနပ်တာ အမှန်ပါ။
နေရာအရွယ် သာမည၊ သင်ယူခြင်းသည် အဓိက...
ကိုယ်လည်း ဆယ်တန်းအောင်ပြီးကာစ အသက်၁၇၊ ၁၈ အရွယ်က
အညာကမူလတန်းကျောင်းကလေးမှာ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး လုပ်အားပေး ကျောင်းဆရာ ၂နှစ်တိတိလုပ်ခဲ့ဖူးတာမို့ အစိုးရ၀န်ထမ်းဆရာတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ခပ်ငယ်ငယ်အရွယ်ကတော့ ပညာမာနနဲ့မို့ ကိုယ့်ကလေးတွေ အပြင်ကျူရှင်ယူရင် ငါပဲညံ့လို့ဖြစ်မယ်လို့ယူဆပြီး တရားဝင်ဝန်ထမ်း မဟုတ်ပေမယ့် ဘာပဲလုပ်လုပ် ကောင်းကောင်းဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့် သင်ကြားရေးကို အပြည့်အ၀အာရုံစိုက်ပြီး ကလေးတွေ အပြင်ကျူရှင်ယူစရာမလိုအောင် အင်တိုက်အားတိုက်သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမလိုအားမရဖြစ်တာကလွဲပြီး အပြင်ကျူရှင်ဆရာတွေအပေါ် ၀န်တိုစိတ်၊ မစ္ဆေရစိတ် တစ်စိုးတစ်စိမှ မပေါ်ခဲ့ဖူးပါ။ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာတွေလဲ မလုပ်ခဲ့ပါ။ သူနဲ့ကိုယ် အပြိုင်သင်ရင် ကလေးတွေ ပညာရေး ပိုတိုးတက်တယ်လို့ပဲ အကောင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်။ အပြင်ဆရာတွေနဲ့လဲ ခင်ခင်မင်မင် ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အပြင်ဆရာဘ၀ရောက်တော့မှ ရည်မှန်းချက်တူသူချင်း မိတ်ဆွေမဖွဲ့နိုင်သူတွေနဲ့ ကြုံရပါတော့တယ်။ ဘယ်ဆရာကမှ ကျောင်းသားတွေ ဒုက္ခရောက်အောင် မလုပ်ကြပါ။ ဆရာဟူသမျှဟာ ကျောင်းသူကျောင်းသားရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ရှေးရှုကြသူတွေချည်းပါ။ ဒီလို ပန်းတိုင်တူကြသူချင်း ညီညီညွတ်ညွတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရင် ပိုပြီးတော့ အကျိုးရှိပြီး ကျောင်းသားတွေ ပိုအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှာ သေချာပါလျက်က ပူးပေါင်းမယ့်အစား မကြားဝံ့မနာသာ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေတာ ကြုံရတော့ အံ့သြလို့မဆုံးနိုင်ပါ။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ဘ၀တွေအတွက် အင်မတန်မှ ရင်လေးမိပါတယ်။
တရားဝင်မဟုတ်ပါဘဲနဲ့ ပါးစပ်ကနေ တွင်တွင်ပြော(သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း အပြင်ကျူရှင်ပြစားကြပါတယ်)ပြီး ကလေးတွေ အပြင်ကျူရှင်ယူချိန်မရှိအောင် တစ်နေကုန်တစ်နေခမ်း ကျောင်းမှာပဲ ခေါ်ထားပြီး စာတွေဖိသင်တာမျိုးကတော့ အင်မတန်မှ စိတ်ပျက်စရာကောင်းလွန်းလှတဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြားထဲက မြေဇာပင်ဖြစ်ရရှာတဲ့ ကျောင်းသားတွေမှာ နားချိန်၊ ကိုယ်ပိုင်ချိန်ဆိုတာ လုံးဝမရှိလောက်အောင် ပင်ပန်းကြရပါတော့တယ်။ ဒါကို မမြင်တာလား၊ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်တာလားတော့ မပြောတတ်ပါ။ ဒီလိုသာလုပ်နေရင် ကိုယ်တို့ကလေးတွေရဲ့ ဘ၀၊ အနာဂတ်က ဘယ်လိုမှ လှပမှာမဟုတ်တော့တာ သေချာပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် ဘယ်သူ့ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကလေးတစ်ယောက်အောင်မြင်မှုရသွားရင် ဆရာစိတ်အပြည့်အ၀နဲ့ ကြည်နှုးဝမ်းသာရမှာဖြစ်သလို ကလေးတစ်ယောက် စာမေးပွဲကျသွားရင် ဘယ်မှာပဲကျကျ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရမှာပါ။ အခုတော့ သူ့ကျောင်းသား၊ ကိုယ့်ကျောင်းသား အစွဲတွေထားပြီး ပညာရေး ၀န်ဆောင်မှုပေးတာ အနန္တဂိုဏ်းဝင်လို့ ခေါ်နိုင်ပါ့မလား စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်။
စာသင်ခန်းထဲမှာ အဖြူနဲ့အစိမ်းဆင်တူ ၀တ်ထားတဲ့ ကျောင်းသားဟူသမျှ ကိုယ့်တပည့်လို့ ယူဆရမယ့် နိုင်ငံဝန်ထမ်းက ကိုယ့်ဆီမှာ ကျူရှင်ယူတဲ့ကလေးကိုပဲ ကိုယ့်ကလေးလို့ သတ်မှတ်ပြီး အပြင်ကျူရှင် ယူတဲ့ကလေးကိုတော့ ကျောင်းသားလို့ မသတ်မှတ်ခြင်းဟာ နိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့ လစာကိုယူပြီး နိုင်ငံတော်ကို သစ္စာဖောက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် နိုင်ငံဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်ကို မလေးစား၊ မလိုက်နာခြင်းလဲ မည်ပါတယ်။ ဒီပြစ်မှုဟာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အတွက် အကြီးလေးဆုံး ပြစ်မှုမြောက်ပါတယ်။ ပြစ်မှုဆိုတာထက် ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ ကျင့်ဝတ်ကို ဖောက်ဖျက်သူလို့ ခေါ်နိုင်တာမို့ ပညာရေးလောက အများကြီးနစ်နာပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်ရင် ဒီအပြုအမူမျိုး လုံးဝမလုပ်သင့်ဘူးလို့လည်း ရင်ထဲ၊ အသည်းထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ယုံကြည်မိပါတယ်။
တိုင်းပြည်လို့ချီပြောပြန်ရင် ဦးဟန်ကြည်တစ်ယောက် စကားကြီး၊ စကားကြယ်ပြောတယ်လို့ စကားတင်းပြောကြမှာ သေချာပါတယ်။ တကယ်တော့ ဆရာတစ်ယောက်အတွက် အနာဂတ်တိုင်းပြည်ဆိုတာ ကိုယ့်လက်ထဲက ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ချစ်မြတ်နိုးခြင်း၊ ကိုယ့်အလုပ်အပေါ်မှာ တာဝန်ယူခြင်းဟာ တိုင်းပြည်ကို ချစ်မြတ်နိုးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတစ်ယောက်ဟာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အနာဂတ်အတွက် ဘာကိုမဆို အမှန်အတိုင်းမြင်ပြီး အရာရာကို ရင်ဆိုင်ရဲဖို့ လိုပါတယ်။ လိုအပ်ရင် မိမိထက် ပညာ၊ ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားသူထံ ကိုယ့်ကလေးတွေကို အပ်နှံသင့်ရင် အပ်နှံပေးရပါလိမ့်မယ်။ မလိုအပ်ဘဲ တလွဲဆံပင်ကောင်းလို့ မရပါ။ ဆရာဝန်တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ရင် ကိုယ်မကုသနိုင်တဲ့ လူနာကို ပိုတတ်ကျွမ်းတဲ့ သမားတော်ဆီပို့ပြီး ကုသမှုခံယူစေခြင်းဟာ လူနာကို တကယ်ချစ်ခြင်း၊ ဂရုစိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲ ငါ့လူနာ၊ ငါပဲဂရုစိုက်မယ်ဆိုတဲ့ မျက်ကန်းမာနနဲ့ လူမိုက်စေတနာကို လက်ကိုင်ထားပြီး မနိုင်မနင်း ကုသနေရင် ကြားထဲက လူနာအသက်ဆုံးရှုံးရမှာ မလွဲပါ။ ဒီအချက်ကို ကိုယ်တို့ရဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ သိစေချင်ပါရဲ့။
အခုတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ပါ။ တစ်ခါက ပြည်နယ်အထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖြစ် အင်္ဂလိပ်စာပြပေးဖို့ ကိုယ်volunteer လုပ်ဖူးပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ဆယ်တန်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာ ဂုဏ်ထူးထွက်ခဲ့ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်တက်ခဲ့သူ၊ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာမှု ၁၃နှစ်သက်တမ်း ရှိသူတစ်ယောက်ဟာ (အခုထိတော့ ထင်သလောက် မကျွမ်းကျင်တာမှန်ပေမယ့်) ဆယ်တန်းရိုးရိုးအောင်ပြီး ကျောင်းဆရာ လုပ်နေသူထက်တော့ ပိုပြီးကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်တာ ကလေးကစ သိပါတယ်။ ကိုယ်က အဲဒီလို ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားလို့ ဘကြီးနွားကို အလကားကျောင်းပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းတာကို အဲဒီကျောင်းက ဆရာများက အဲဒီဆရာလာသင်ရအောင် ငါတို့က သူလောက်မတတ်လို့လား၊ ဘာလားဆိုပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းရဲ့ စေတနာကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပီသစွာနဲ့(ရှုင်တော်ဘုရားဟောတော်မူတဲ့ တရားတော်ကို ပြောင်းပြန်ကျင့်သုံးပြီး) စော်ကားကြပါတယ်။ စေတနာကနေ ဝေဒနာဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်ခဲ့ရတဲပ ဦးဟန်ကြည်လည်း ကိုယ့်ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ကို ရင်လေးလေးနဲ့ ကိုယ့်ကမ်းလှမ်းချက်လေးကို ပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရဖူးပါတယ်။
ပညာရေးလောကမှာ စိတ်အနာဆုံးက ကလေးတွေရဲ့ အသိဥာဏ်ကို ဖွင့်လှစ်ပေးဖို့ မကြိုးစားဘဲ ဒါပေးရင် ဒါယူဆိုတဲ့ စံနစ်ကို ကျင့်သုံးပြီး တစ်ဖက်ပိတ်မူနဲ့ သင်ကြားမှုပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတွက်သလိုတွက်မှ အမှတ်ပေးမယ် ကျန်တဲ့နည်းနဲ့တွက်ရင် အမှတ်မပေးဘူးဆိုတာမျိုးကတော့ အင်မတန်မှ သေးသိမ်ညံ့ဖျင်းတဲ့ စိတ်ထားလို့ပဲ မထောက်မညှာပြောရပါလိမ့်မယ်။ သင်စားဖူးသော အသီးများကိုဖော်ပြပါ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဆရာမက “ပန်းသီး၊ ကြက်မောက်သီး၊ စပျစ်သီး” လို့ ဖြေပေးထားတာကို ကျောင်းသားက သူစားဖူးတဲ့ အသီးအတိုင်း “ငှက်ပျောသီး၊ ဆီးသီး၊ သစ်တော်သီး” လို့ဖြေရင် အမှတ်မပေးတာ အင်မတန်မှ ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဆရာမပီသတဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ ဖြန့်ထွက်တွေးလိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ချိုးနှိမ်ပစ်ပြီး ကိုယ်တို့တိုင်းပြည်ကို အညွန့်ကျိုးအောင် လုပ်ပစ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်က အားကိုးရမယ့် ပညာတတ်လူငယ်တွေ မွေးထုတ်ဖို့ နိုင်ငံတော်က အားကိုးတကြီး လစာပေးထားတဲ့ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်အတွက် မလုပ်သင့်ဆုံးလုပ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အသီးဆိုတာ မြင်သာအောင် ဥပမာပေးခြင်းပါ။ သင်္ချာလို ဘာသာရပ်မှာ ပိုလို့ဆိုးပါတယ်။ ဖွင့်တွေးရမယ့် ဘာသာရပ်ကို ဆရာဖြစ်သူက သူတတ်တဲ့ နည်းတစ်နည်းနဲ့ ချုပ်ပြီး အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းချလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကလေးမှ အများကြီးနစ်နာသွားပါတော့တယ်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာစစ်စည်းမျဉ်းမှာတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ပါ။ ကလေးတွေရဲ့ ပင်ကိုညာဏ်ရည်ကို ဦးစားပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတော်က မူဝါဒချမှတ်ထားပေမယ့် ဆရာဖြစ်သူက အကောင်အထည်မဖော်ဘဲ နိုင်ငံတော်ကို သစ္စာဖောက်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တို့တိုင်းပြည်မှာ ပညာတတ်တွေဟာ ညံ့သထက် ညံ့သွားဖို့ပဲ ရှိပါတော့တယ်။
ပညာရေးလောကမှာ တရားဝင်ရှစ်နှစ်(တကယ်ဆိုရင် ဆယ်တန်းဖြေပြီးကတည်းက ဆယ်တန်းစာ စသင်ခဲ့တာမို့ ၁၅နှစ်ထဲ ရောက်လာပါပြီ) ရှိလာပြီမို့ အမြင်မတော်တာတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေး ရှိနေပါပြီ။ သင်ခဲ့တဲ့ ပညာနဲ့ တက်ခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ငဲ့ညှာနေတာကြောင့် ပါးစပ်က ဘာမှ ထုတ်မပြောဖြစ်ပေမယ့် မြိုသိပ်ထားရတာတွေလည်း တနင့်တပိုးပါ။
အမနာပ ပြောခံရတိုင်းမှာ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့
ဆိုတဲ့ ကဗျာကို အံကြိတ်ပြီး ရွတ်ရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖြေရပါတယ်။ စိတ်မပြေပေမယ့် နည်းနည်းတော့လည်း နေသာထိုင်သာတော့ ရှိသွားတာ သေချာပါရဲ့။ အကောင်းလုပ်နေတာကို အကောင်းမြင်မခံရဘူးဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ တစ်ခါတစ်လေလည်း စိတ်ပျက်သွားတတ်တာလည်း မညာချင်ပါ။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ဒီလောကကို အင်မတန်မြတ်နိုးပြီး ကိုယ့်တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ နိုင်ငံ့သားကောင်းတွေ အများအပြားမွေးထုတ်ပေးရမယ်ဆိုတာ အမှန်အတိုင်းမြင်ပြီးဖြစ်တာာမို့ ဒီလောကကိုပဲ ဆက်ပြီးဖက်တွယ်နေဦးမှာပါ။ ဒါကြောင့် ရှေ့ဆက်ပြီးလည်း ဦးဟန်ကြည်တစ်ယောက် ဆရာမပီသသူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေကို ခံနေရဦးမှာပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခွေးဟောင်တိုင်း ထကြည့်နေရရင် အိပ်ရေးပျက်တာပဲ အဖတ်တင်ရုံရှိမှာမို့ ကိုယ်လောက်မှ ပညာမတတ်သူတွေ၊ ကိုယ်လောက်မှ တိုင်းပြည်အပေါ်တာဝန်မကျေသူတွေရဲ့ ပြောစကားတွေကို တစ်ခွန်းမှ လက်တုံ့မပြန်ဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထူးချွန်ဆုံးဖြစ်အောင်၊ ကိုယ်လက်လှမ်းမီသမျှ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို အတောက်ပဆုံးဖြစ်အောင် အရောင်တင်ပေးရင်း ဒီတိုင်းပြည်က သင်ပေးတဲ့ ပညာနဲ့ ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ ဒီနိုင်ငံသားတွေ အပေါ် တာဝန်ကျေနိုင်သမျှကျေအောင် ဆက်ကြိုးစားပါဦးမယ်။
Posted by Han Kyi at 11:28:00 am4comments:
ဂဠုန်ဆားချက်ခြင်း . . .
အချိန်အားမရအောင် အလုပ်များလွန်းတာကြောင့် စာမရေးဖြစ်ပါ။ အတန်းတင်စာမေးပွဲကြီးဖြေဖို့ကလည်း ၁၀ရက်ပဲ လိုတော့တာမို့ ကျောင်းသားရော၊ ဆရာပါ မနားမနေ အာရုံစိုက်နေရချိန်ဖြစ်တာကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ ကိုယ်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ ပညာရေးစံနစ်အရ အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့် အခုအခေါ်
Grade 11 အဆင့်စာမေးပွဲဟာ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀လမ်းကြောင်းကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် အရေးအကြီးဆုံးအရာ ဖြစ်တာကြောင့်လည်း အနာဂတ်အတွက် ဒီကာလဟာ မပေါ့ဆသင့်တဲ့ ကာလဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်လည်း မမှားပါ။
ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် ထွက်ခဲ့မှ၊ မိဘဆရာ ဘ၀င်ကျ...
ကလေးတွေဆိုတာ မိဘနဲ့ဆရာက ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် အုပ်ထိမ်းမှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေ လုပ်မပေးရင် မမြင်ရသေးတဲ့ အနာဂတ်ကို ခေါင်းထဲကြာကြာသွင်းလေ့ မရှိကြတာကြောင့် ဆရာတွေခမျာ ဒီရပ်ပတ်တွေမှာ ကလေးတွေကို ပိုးမွေးသလို ဂရုတစိုက်နဲ့ မွေးကြရရှာပါတယ်။ ကိုယ်တို့ခေတ်ကတော့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အတွက် လေလွင့်ပျက်စီးစရာ နေရာနဲ့ အထောက်အကူပစ္စည်းသိပ်မရှိခဲ့တာမို့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အတွက် ပညာရေးကိုပဲ အပြည့်အ၀ အာရုံစိုက်ဖို့ဆိုတာ သိပ်မခဲယဉ်းတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပန်းဖြေစရာ၊ စိတ်ထွက်ပေါက်ပေးစရာတွေ မှိုလိုပေါက်နေတဲ့ ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ အပျော်အပါးမက်တဲ့ ကလေးတွေရဲ့ သဘာဝအတိုင်း ပညာရေးကို အာရုံစိုက်မှု ကျဆင်းလာသလို အပျော်အပါးနဲ့တွေ့ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့လည်း အင်မတန်မှ ခက်ခဲလာပါတော့တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခေတ်ဆိုတာ ရှေ့ကိုသာချီတက်ရမှာ သဘာဝမို့ တိုးတက်မှုကို အပြစ်တင်နေမယ့်အစား ကလေးတွေကို ခေတ်နဲ့အညီထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်ပဲ အလေးထားပြီး ကြိုးစားရမှာပါ။ ဆရာမောင်မိုးသူပြောတဲ့စကားလို ခေတ်မီမီကမ္ဘာကြည့်ကြည့်မြင်မှပဲ ကလေးတွေရဲ့ဘ၀ လှပပါလိမ့်မယ်။
ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ကိုယ့်လက်ထဲမှာဆိုတာကို ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တဲ့ ဦးဟန်ကြည်တစ်ယောက် ကျောင်းသားတွေအကြောင်းကိုပဲ အချိန်ပြည့်ခေါင်းထဲထည့်လို့ အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေရင်း ဘယ်သကောင့်သားကမြန်မာမှုပြုပြီး မြန်မာဇာတ်သွင်းလိုက်မှန်းမသိတဲ့ ချစ်သူများနေ့ တစ်ဖြစ်လဲ St.Valentine's day ကိုပါမေ့သွားတာကြောင့် အိမ်သူသက်ထားဇနီးမယားရဲ့ အငြိုငြင်ကိုပါ ခံလိုက်ရတဲ့အထိပါ။ အိမ်ရှင်မဆိုတာ ဘ၀ခရီးကို နောက်ဆုံးအချိန်အထိ မခွဲမခွာသွားကြမယ့်သူတွေဖြစ်တာမို့ ခဏတာစိတ်ဆိုး၊ စိတ်ကောက်တာဟာ စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းမှန်း ကောင်းကောင်းသိထားပေမယ့် တစ်နှစ်တာပဲတွေ့ကြုံရမယ့် ကျောင်းသားတွေအတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ် မထိခိုက်ရေးကိုပဲ ဦးစားပေးခဲ့ရပါရဲ့။ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားအတွက်နဲ့ အိမ်ရှင်မအတွက်တို့ ထိပ်တိုက်ဆုံရင် ကလေးတွေကိုပဲ ဦးစားပေးရင်း အိမ်ရှင်မကို မျက်နှာချို မကြာခဏသွေးရတာကို မောင်မင်းကြီးသား၊ မယ်မင်းကြီးမလေးများ သိတော်မူကြပြီး စွမ်းစွမ်းတမန်ကြိုးစားတော်မူကြရင်တော့လည်း အတိုင်းထက်အလွန်ပါ။
ဒါပေမယ့် လူငယ်ဆိုတာ လူငယ်ပဲဖြစ်တာမို့
နေမြဲတိုင်းနေ၊ လေမြဲတိုင်းလေနေကြတဲ့ သကောင့်သားလေးတွေက ရှိနေဆဲပါ။
ဘယ်လိုနေနေ၊ ဘာတွေပဲလုပ်လုပ် ကိုယ့်ကျောင်းသားတွေကို မြင့်နိုင်သမျှအမြင့်ဆုံးအထိ မြှင့်တင်ပေးဖို့ဆိုတာ ကိုယ်တို့ဆရာတွေရဲ့ အလုပ်ဖြစ်တာမို့ ကိုယ်ကတော့ သူတို့ကိုစာကျက်ခိုင်းမနေတော့ဘဲ ကိုယ်တိုင်ပဲ ရှေ့ကနေ ဦးဆောင်ပြီး ကျက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူတို့စာဖတ်ဖို့ပျင်းနေရင် ကိုယ်ကပဲဝိုင်းဖတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တွက်စာတွေကိုတော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်မှရမှာဖြစ်တာကြောင့် မောင်ပျင်း၊ မပျင်းလေးတွေအတွက် သင်ပုန်းပေါ်မှာ တွက်ပြပြီးရင် ဖျက်ပစ်လိုက်ပြီး ပြန်တွက်ခိုင်းယူရပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ နိုင်ငံတကာပညာရေးစံချိန်အရ သင်ကြားမှုနည်းစံနစ်တွေထဲမှာ အညံ့ဖျင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Spoon feeding education, Parrot learning education ဖြစ်မှန်း သိပေမယ့် ကိုယ့်ကျောင်းသားတွေကို How ထက် Why ကို ပိုပြီးအလေးအနက်ထားအောင်၊ ဆက်စပ်တွေးခေါ်တတ်အောင်၊ ဖြန့်တွေးတတ်အောင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားပေးခဲ့ပြီး အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ဒီကာလမှာတော့ စာအုပ်ဟောင်းကြီးကို ဖုန်ခါပြီးပြန်ကိုင်ရသလို နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ဆရာ့ဆရာများသုံးခဲ့ကြတဲ့ သင်ကြားမှုနည်းစံနစ်ဟောင်းကြီးကိုပဲ မချစ်သော်လည်းအောင့်ခါနမ်းရပေမယ့် ရင်ထဲမှာတော့ နည်းနည်းမှ ဘ၀င်မကျမိတာအမှန်ပါ။
ဘ၀င်ကျခြင်းမကျခြင်းထက် ကိုယ့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အောင်မြင်မှုကိုပဲ ရှေးရှုရမယ့် တာဝန်ရှိသူဖြစ်တာမို့ ဘာဘာညာညာမတွေးအားတော့ဘဲ ကျောင်းသားတွေ အရိုးစွဲနေတဲ့သင်ကြားမှု နည်းစံနစ်မှတပါး ဒီအချိန်မှာ ကျန်တာအားကိုးရာမရှိတော့ပါ။ ခေတ်မီသင်ကြားမှုနည်းစံနစ်တွေကို လေ့လာလိုက်စားပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့ပေမယ့် ဒီနည်းစံနစ်တွေဟာ ပင်ကိုခံယူလိုစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေအတွက်ပဲ အဆင်ပြေတာကို အတွေ့အကြုံကပေးတဲ့ အသိကြောင့် သိပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဦးဟန်ကြည်တစ်ယောက်တော့ တစ်နေကုန်တစ်နေခမ်း အသံပြာအောင် စာဝိုင်းကျက်လိုက်၊ ခြေထောက်တွေ သွေးတောင့်မတတ် သင်ပုန်းရှေ့မှာ တွက်ပြလိုက်၊ ကျောင်းသားတွေကြားကို ကြွက်တတ်မတတ်လှည့်ပတ်ကြည့်ရင်း တစ်ယောက်ချင်းစီ ရှင်းပြလိုက်နဲ့ မကြာမီလာတော့မယ့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကြီးကို ကြိုဆိုဖို့ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ အင်တိုက်အားတိုက်လုံးပန်းနေရပါကြောင်း။ ။
ထူးချွန်အောင်ပံ့ပိုးနိုင်ဖို့ ဆရာတစ်ယောက်ဟာ ပညာရေးနည်းစံနစ်၊ နည်းဗျူဟာနဲ့ ကျောင်းသားစိတ်ပညာကအစ နားလည်တတ်ကျွမ်းထားဖို့ လိုအပ်တာကို ကောင်းကောင်းသိပေမယ့် ကိုယ်တို့တိုင်းပြည်မှာ ပညာရေးဘာသာရပ်ကို လေ့လာဖို့ ရည်ညွှန်းစာအုပ်နည်းပါးတဲ့အပြင် လူတစ်ယေက်ကို ဘွဲ့တစ်ခုသာယူနိုင်တဲ့ စံနစ်ဖြစ်တာမို့ ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကိုလည်း မသွားနိုင်တော့တာကြောင့် အွန်လိုင်းပေါ်က ပညာရေးဆိုဒ်တွေကိုပဲ ဦးဟန်ကြည် အားကိုးနေရပါတယ်။ ပညာရေးပါရဂူတွေရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတွေဖတ်ရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင် ကြိုးစားနေပေမယ့် အားမရနိုင်တာကြောင့် အွန်လိုင်းကနေ ပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဒီပလိုမာတစ်ခု ထပ်ယူဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့ အခက်အခဲတွေ တစ်ပုံတပင်ရှိနေပါတော့တယ်။
မြို့မဟုတ်၊ တောမဟုတ်ဒေသက ဦးဟန်ကြည်မှာ သူများတကာတွေလို Credit Card တွေလည်းမရှိ၊ နိုင်ငံခြားဘဏ်မှာ အကောင့်လည်းမရှိတာကြောင့် အခပေးရတဲ့ ဒီပလိုမာတွေကို ယူဖို့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခမဲ့အွန်လိုင်းဒီပလိုမာကိုသာ အားကိုးရတော့မှာမို့ မွှေနှောက်ရှာဖွေနေခဲ့တာ အတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့် ဘယ်တက္ကသိုလ်မှာ ဘယ်လိုသင်ယူရမယ်ဆိုတာ အခုထိကောင်းကောင်း သဘောမပေါက်နိုင်ပါ။
နိုင်ငံတကာထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ပဲ ကိုယ့်တိုင်းပြည်က ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို
တိုးတက်တဲ့နည်းစံနစ်တွေနဲ့ သင်ကြားပေးနိုင်ဖို့ကိုသာ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ထားတာမို့ ဒီပလိုမာဆိုတာထက် စံနစ်တကျ ပို့ချပေးမယ့် အွန်လိုင်းပညာရေးကို ဘယ်ကရနိုင်မယ်ဆိုတာ သိရရင်ကလေးတွေအတွက် အင်မတန်အကျိုးများမယ့် ကိစ္စဖြစ်တာမို့ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများက လမ်းညွှန်ပေးကြဖို့ မတတ်သာတဲ့အဆုံး ရှေ့မျက်နှာ နောက်ထားလို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။ ။
Posted by Han Kyi at 11:57:00 am No comments: